ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: ပျောက်နေသော ကျွန်မနှင့် မကာအို ခရီးတစ်ထောက်
blackroze 15 August 2011 at 11:17
rose 16 August 2011 at 01:02
Oh... 14 August was your birthday. Happy Birthday to you!! May you be always happy! Your travelling photo are so nice. Impressive :)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 16 August 2011 at 01:40
မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်း ရာကျော်တိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့..
မကာအို ပုံတွေတွေ့တော့ ကိုးရီးယား F4 ကို သတိရသွားတယ် ဟဲဟဲ
ဒါနဲ့ ၂ယောက်တည်း လှေကလေး မစီးခဲ့ဘူးလား လို့..
ပဲရစ်စတိုင် လုပ်ထားတာလေးက မိုက်လိုက်တာနော် ကောင်းကင်လဲ အစစ်လား ထင်ရတယ်
ဆွေလေးမွန် 16 August 2011 at 02:21
မချောပြောသလို လှေကလေး နစ်ယောက်တည်းစီးရ ရင် ဖြင့် အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့လေ.
ခုတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ ပြောရ စိတ်ကူးနဲ့ တောင် မစီးနိုင်သေးပါဘူးကွယ်။
စံပယ်ချို 17 August 2011 at 01:52
ဆွေလေးမွန် 27 January 2012 at 02:55
အစ်မရေ... အစ်မ၀တ္တုကို အချိန်ရရင်တော့ အစအဆုံး ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်အုံးမယ်...
ညီမလဲ ၀တ္တုစပြီး ရပ်နေတာ ၁နှစ်ကျော်ပြီ... စာလာဖတ်တဲ့သူတွေကို အားနာလွန်းလို့ ခေါင်းငုံနေရတယ်... အားကလဲနာပါတယ်... ဆက်ရေးဖို့ Mood ကလဲ မ၀င်... အချိန်ကလဲမရှိ...
မကာအိုက ပြင်သစ်စတိုင်လုပ်ထားတဲ့ဟိုတယ်က Venetian Hotel လား.. အချိန်မရလို့ မ၀င်ခဲ့ရဘူး... Galaxy ဟိုတယ်ပုံစံကြီးကိုတော့ အပြင်ကကြည့်ပြီး သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ...
အစ်မရေ ပြောရင် အစ်မနဲ့ မုန့်စားခဲ့တဲ့နေ့ကို သတိရလာပြီ... ဒင်းဆန်းလေးလဲလွမ်း... ရာသီဥတုအေးအေးကိုလဲလွမ်းတယ်...
ဟုတ်တယ် ညီမရေ . Venetian Hotel ပဲ.. ညီမ comment ကို ဖုန်းကနေ Public လုပ်လိုက်တာ မှားပြီးနှိပ်မိလို့ delete ဖြစ်သွားတာနဲ့ အစ်မ ပြန်တင်ပေးထားတယ်.. :) :)